दरबन्दीको अभावमा गुज्रदै हुम्लाका अधिकांश सरकारी विद्यालय ! - Naya Patrika
राजविराज विमानस्थल एक दशकपछि पुनः सञ्चालनमा
पोल गाडेको १५ वर्षपछि विद्युतीय सामग्री वितरण
‘दमकल कमान्डर’ भन्छन्ः खटाइ बढी, तलब कम
पाँचवर्षसम्म यो सरकार टिक्छ, ढुक्क हुनोस् : प्रचण्ड
शिक्षामा लगानीअनुसार प्रतिफल आएनः ओली
रूकुममा डेढ महिनामा साढे १० हजारले गरे स्वास्थ्य बीमा
निजीस्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन आलुखेती
आमाहरूको पहलमा गुर्जामा सुविधा सम्पन्न ‘बाथ हाेम’
गृहमन्त्रीको अनाैठाे सम्पत्ति विवरण : एक कुकुर, एक कुकुर्नी, त्यो पनि छिमेकीले दिएकाे !
सिप सिकेर व्यवसायी बन्दै हुम्लाका महिला
दरबन्दीको अभावमा गुज्रदै हुम्लाका अधिकांश सरकारी विद्यालय !
नरजन तामाङ हुम्ला | चैत २४, २०७४
सरकारले यस आर्थिक वर्षलाई शैक्षिक सुधारको वर्षको रुपमा लिएर कामकारबाही अगाडि बढाउने बताइरहेको छ । ५ कक्षासम्मको सादा पुस्तकलार्इ विस्थापित गरी रंगिन पुस्तक हुने पनि बताइसकेको छ । तर, आवश्यक दरबन्दीकाे अभावमा गुज्रिरहेका छन्- हुम्लाका अधिकांश सरकारी विद्यालय ।
हुम्लामा ५५ वटा माध्यामिक तह, ५४ वटा निम्न माध्यमिक तह र ९० वटा प्राथामिक तहका विद्यालयहरु छन् । माध्यमिक अन्तर्गत एक विद्यालय बराबर ५ जना दरबन्दी हुनुपर्ने शिक्षा निमावलीमा व्यवस्था छ ।
तर, हुम्लाका अधिकांश शिक्षण संस्थामा सो नियम लागु नभइ कागजमै सिमित भएकाे देखिन्छ । हाल जिल्लाभर सञ्चालित माविमा १ सय २५ जना शिक्षक आवश्यक पर्छ । जहाँ २४ जना दरबन्दीका र १७ जना राहत शिक्षकका शिक्षक छन् । मावि तहमा मात्रै तत्काल ४१ जना दरबन्दीका शिक्षकको अपुग देखिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीले बताए । निम्नमाध्यामिक विद्यालयमा १ सय ६३ शिक्षक आवश्यक पर्छ तर, ७५ जना दरवन्दी र १७ जना राहतका शिक्षक छन् ।
त्यसैगरी, ९० वटा प्राथामिक तहको कक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयसहित निम्नमाध्यामिक र माध्यमिक विद्यालयसँगै जोडिएको प्रावि तहका विद्यलायको कुल संख्या १ सय ३८ छ । प्राथमिक तहमा ४ सय १४ दरवन्दी आवश्यक रहेकोमा ३ सय १७ जना शिक्षकको भरमा थामिएको छ । प्रावि तहमा ५४ दरबन्दी आवश्यक रहेको शाखा अधिकृत शाहीले बताए । उनका अनुसार हाल प्रावि तहमा ३ सय १९ दरबन्दी र ४१ जना राहत शिक्षक छन् । अन्य प्रथामिक विद्यालयमा बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताले विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरेको उनले बताए ।
१३ प्रथामिक तह बाल विकासको भरमा
जिल्लाको १३ वटा प्राथमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरु दरबन्दी विनै बाल विकास शिक्षकको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको संख्या पुगेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दरबन्दी विनै विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । विद्यालय बाल विकास शिक्षकको भरमा विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको शाखा अधिकृत शाहीले स्विकारेका छन् ।
शैक्षिक योग्याता विनाकै शिक्षक
शैक्षिक योग्यता विनाकै शिक्षकहरुले बाल विकास केन्द्रको सहजकर्ताको काम गर्ने गरेका छन् । कक्षा ८ पास गरेकाले पनि बाल विकास केन्द्रको सहजकर्ताका रुपमा काम गदै आएका पाइएको छ ।
जिल्लामा शैक्षिक योग्यता विनाकै शिक्षकहरुले पढाउन थालेपछि विद्यालयमा समस्या हुने गरेको हो ।
सिमकोट गाउँपालिकाको दोभान, कालाशिल्ता प्रावि कक्षा ४ सम्म खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर २ को सरस्वती प्रावि कक्षा ४ सर्केगार्ड गाउँपालिका वडा २ सुर्योदय र ईश्वर प्रावि ३ कक्षासम्म बाल विकास केन्द्रको सहजकर्ताका भरमा विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको शाहीले बताए । चंखेली गाँउपालिकाको शान्ति, महादेव र विद्या ज्योति प्रावि बिना दरवन्दी वाल बिकासका सहजकर्ताद्धारा कक्षा सञ्चालित छ ।
त्यस्तै अदानुचुुली गाँउपालिकाको पागर पानी प्रावि र ताँजाकोट गाँउपालिकाको जनता, महादेव, कैलाश र जगतमाला प्राविमा पनि ३ कक्षासम्मको पढाई भइरहेको छ । त्यहाँका विद्यालय पनि शिक्षक दरबन्दी बिनानै अनुमति दिइएको छ ।
मन्त्रीको सम्पत्ति कति बढ्यो ?
थोत्रो साइकल देखाउने मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग ५५ लाख नगद, सुन र घरजग्गा
जातभातको लामो टुपी
सम्पादकीय : पार्टीको असमावेशी अनुहार
ओली र प्रचण्डसँग राजपा नेताहरूको छलफल